प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राजेन्द्र खड्गीले के यस्तो दिए बयान, प्रहरीलाई थपियो अब यस्तो चुनौती – Etajakhabar
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राजेन्द्र खड्गीले के यस्तो दिए बयान, प्रहरीलाई थपियो अब यस्तो चुनौती
काठमाण्डौ – मानव बेचविखनको अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । नेपाली फिल्ममा चर्चित द्वन्द्व निर्देशक खड्गी दुई सातादेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
उनलाई गैरकानुनी रुपमा नेपालीहरुलाई विदेश पठाएको अभियोग लागेको छ । उनीसंग प्रहरीले बयान लिएको छ । प्रहरीसंगको बयानमा खड्गीले उनीहरुलाई कोरिया लगेको स्वीकार गरेका छन् ।
खड्गीले दिएको बयानमा अर्काे एक नया तथ्या फेला परेको छ । उनले प्रहरी समक्ष आफु जस्तै अरु कलाकारले पनि त्यसैगरी विदेश पठाउने गरेको बताएका छन् । उनले प्रहरी समक्ष भनेका छन् ‘सबैले लगिरहेका थिए । त्यसैगरी मैले पनि लगेको हुँ । उनले आफ्नो यो कामलाई अपराध हो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।
खड्गीको यो बयानबाट अन्य कलाकारले पनि अवैधानिक तरिकाले मानिसहरुलाई विदेश लैजाने गरेको देखाए पछि प्रहरी सामु अर्काे चुनौती थपिएको छ । खड्गीले विदेश पठाएका युवाहरु पीडित छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि अहिले सम्म केही खुलेको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: १२:४२:२४
‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को दोश्रो गीत सार्बजनिक(भिडियो सहित)
नोभेम्बर २० मा इटालिमा बिहे गर्दै दीपिका रणबीर, नजिकका परिवार र केही साथीलाई मात्र निम्तो
दीपका र रणवीरले लगन गाँठो कस्ने दिनको टुंगो, कहिले र कहाँ पार्दैछन् झ्याइँ ?
‘साहो’मा ‘बाहुबली’को भन्दा खतरनाक एक्शन गर्दै प्रभास
प्रेम सम्बन्धपछि विदेशीसँग विवाह गर्ने बलिउड अभिनेत्रीहरु
कपिल शर्मा चाँडै नै टेलिभिजनमा फिर्ती हुँदै, के हो नयाँ प्रोजेक्ट ?
आमिर खानको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ अहिलेसम्मकै ठूलो फिल्म, १५०० करोड कमाउने दावी
सन्नीले गरिन् सहयोगको आग्रह
‘बाहुबली’ सिरिजको अपार सफलतापछि खतरनाक रोलमा खेल्दै प्रभास